किन माइक्रोफोन हेडफोनमा काम गर्दैन: कारणहरू र समस्या निवारण - ध्वनि - 2019
किन माइक्रोफोन हेडफोनमा काम गर्दैन, र यो समस्या कसरी हल गर्ने
माइक्रोफोन लामो समयसम्म कम्प्यूटर, ल्याप्टप वा स्मार्टफोनको लागि अपरिहार्य उपकरण भएको छ। यो "ह्यान्ड फ्रि" मोडमा मात्र संवाद गर्न मद्दत गर्दछ, तर आवाजले प्रयोग गरेर उपकरणका प्रकार्यहरू नियन्त्रण गर्न, पाठमा बोल्ने कन्वर्ट र अन्य जटिल अपरेशनहरू प्रदर्शन गर्न पनि मद्दत गर्दछ। सबैभन्दा अनुकूल फारम कारक विवरण माइक्रोफोनको साथ हेडफोन हुन्, ग्याजेटको पूर्ण ध्वनि स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ। यद्यपि तिनीहरू असफल हुन सक्छन्। हामी यो वर्णन गर्नेछौं कि माइक्रोफोन हेडफोनमा किन काम गर्दैन, र यो समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्नुहोस्।
सम्भावना खारेज र तिनीहरूलाई हटाउने तरिका
संदूषणलाई सम्पर्क गर्नुहोस्
ध्वनि कार्ड चालकहरूको कमी
हेडसेटको मुख्य समस्या दुई समूहमा विभाजित गर्न सकिन्छ: म्यानुअल र प्रणाली
हेडसेटको साथमा सबै समस्याहरू मेकानिकल र प्रणालीमा विभाजन गर्न सकिन्छ। पहिलो अचानक देखा पर्यो, प्रायः प्रायः हेडफोनको खरीद पछि। पछि तुरुन्तै देखा पर्छ वा ग्याजेटको सफ्टवेयरमा परिवर्तनहरूसँग सम्बन्धित छन्, उदाहरणका लागि, सञ्चालन प्रणाली पुन: स्थापना गर्दै, ड्राइभरहरू अद्यावधिक गर्दै, नयाँ कार्यक्रमहरू र अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्न।
वाड वा वायरलेस हेडसेटको साथमा धेरै माइक्रो समस्याहरू सजिलै संग घरमा समाधान गर्न सकिन्छ।
प्राय: समस्या तार गल्तीको कारण हो।
9 0% मामलाहरुमा, हेडफोनमा आवाज संग समस्याहरू हेडसेटको अपरेसनको क्रममा उठेको माइक्रोफोन सिग्नलले बिजुली सर्किटको ईमान्दारतासँग सम्बन्धित छन्। क्लिफ क्षेत्रहरूको सबैभन्दा अधिक संवेदनशील क्यान्सरहरूको जोडीहरू छन्:
TRS कनेक्टर मानक 3.5 मिमी, 6.35 मिमी वा अन्य;
अडियो शाखाङ्कन नोड (सामान्यतया एक अलग एकाइको रूपमा भोल्युम नियन्त्रण र नियन्त्रण बटनहरू सहित);
सकारात्मक र नकारात्मक माइक्रोफोन सम्पर्कहरू;
ब्लुटुथ मोडलहरूमा ब्लुटुथ मोड्युल कनेक्टर।
यस्तो समस्या पत्ता लगाउन संयुक्त क्षेत्र वरिपरि विभिन्न दिशामा तारको चिकनी गतिलाई मद्दत गर्नेछ। सामान्यतया, सिग्नलको केही स्थानहरूमा यो संकेत आवधिक रूपमा देखिन्छ, यो अपेक्षाकृत स्थिर हुन सक्छ।
यदि तपाइँसँग बिजुली उपकरणहरू मरम्मत गर्न कौशलहरू छन् भने, बहुविधको साथ हेडसेट सर्किट बजाउने प्रयास गर्नुहोस्। तलका चित्रहरू सबैभन्दा लोकप्रिय संयुक्त जैक मिनी-जैक 3.5 मिमीको पिनआउट देखाउँछ।
संयुक्त जैक 3.5 मिमी जैक 3.5 मिमी पिनआउट
यद्यपि, केहि निर्माताहरूले कनेक्टरहरूको सम्पर्कको विभिन्न व्यवस्थाको साथ प्रयोग गर्छन्। सबैभन्दा पहिला, यो नोकिया, मोटोरोला र एचटीसी बाट पुरानो फोनहरूको विशिष्ट छ। यदि ब्रेक पत्ता लाग्यो भने, यो सजिलो गरेर हटाउन सकिन्छ। यदि तपाईंसँग सोल्डरिंग फलामसँग काम गर्ने मौका पाउनुभएन भने, यो एक विशेष कार्यशालासँग सम्पर्क गर्न राम्रो छ। निस्सन्देह, यो हेडफोनको महंगी र उच्च-गुणस्तर मोडेलका लागि सान्दर्भिक छ, "डिस्पोजेबल" चीनी हेडसेट को मरम्मत अप्रत्यक्ष हो।
कनेक्टरहरू सञ्चालनको समयमा गहिरो हुन सक्छ।
केहि अवस्थामा, उदाहरणका लागि, दीर्घ-सम्बन्ध भण्डारण पछि वा धूल र नमीमा लगातार प्रदर्शनको साथ, कनेक्टरहरूको सम्पर्कले ग्याँस र अक्साइडलाइज गर्न सक्छ। धूलको बाह्य-ढोकाहरू पत्ता लगाउन सजिलो छ, ग्ल्यामर वा हरियो स्पेसहरू प्लगमा वा सुकेटमा देखिनेछन्। निस्सन्देह, उनि सतहहरु को बीच बिजुली संपर्क तोडने, हेडसेट को सामान्य संचालन को रोकथाम।
घेराबाट ग्याँस हटाउन राम्रो तार वा दाँतपट्टि हुन सक्छ। प्लग - कुनै पनि फ्ल्याट सफा गर्न यो सजिलो छ, तर अति तेज वस्तु पनि गर्नेछैन। सतहमा गहिरो खरोंच छोड्ने प्रयास नगर्नुहोस् - तिनीहरू कनेक्टरहरूको पछिल्ला ओक्साइडेशनको लागि हाडबेड हुनुहुनेछ। कपासको साथ क्यान्सर चिसो संग अन्तिम सफाई गरिन्छ।
कारण ध्वनि कार्ड चालकसँग सम्बन्धित हुन सक्छ।
ध्वनि कार्ड, बाहिरी वा एकीकृत, कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटमा छ। ध्वनि र डिजिटल संकेतहरूको पारस्परिक रूपान्तरणको लागि यो जिम्मेवार छ। तर उपकरणको सही अपरेसनको लागि, विशेष सफ्टवेयर आवश्यक छ - एक चालक जसले अपरेटिङ सिस्टमका आवश्यकताहरू र हेडसेटको टेक्निकल विशेषताहरू पूरा गर्नेछ।
सामान्यतया, यस्तो ड्राइभरमा motherboard वा पोर्टेबल उपकरणको मानक सफ्टवेयर प्याकेजमा सामेल गरिएको छ, तर जब ओएस पुन: स्थापना वा अद्यावधिक गर्दा, यो स्थापना रद्द गर्न सकिन्छ। तपाईं यन्त्र प्रबन्धक मेनुमा ड्राइभरको उपस्थितिको लागि जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। यो कसरी Windows7मा देखिन्छ?
साधारण सूचीमा, वस्तु "ध्वनि, भिडीयो र गेमिंग उपकरण" फेला पार्नुहोस्।
र यहाँ विन्डोज 10 मा समान विन्डो हो:
विन्डोज 10 मा, यन्त्र प्रबन्धक विन्डोज7मा संस्करण बाट थोडा फरक हुनेछ
"ध्वनि, भिडीयो र गेमिङ यन्त्रहरू" लाइनमा क्लिक गर्नुहुँदा, तपाइँ ड्राइभरहरूको सूची खोल्नुहुनेछ। सन्दर्भ मेनुबाट, तपाईँले तिनीहरूको स्वचालित अद्यावधिक प्रदर्शन गर्न सक्नुहुनेछ। यदि यसले मद्दत गर्दैन भने, तपाईंले नेटमा तपाईंको अपरेटिङ सिस्टमको लागि Realtek HD अडियो चालक फेला पार्नु पर्छ।
केही प्रोग्रामहरूसँगको विवादले हेडसेट सञ्चालनको साथ हस्तक्षेप गर्न सक्छ।
यदि माइक्रोफोनले सही काम गर्दैन वा एक निश्चित सफ्टवेयरसँग काम गर्न अस्वीकार गर्दछ भने, तपाईंलाई यसको राज्यको व्यापक निदानको आवश्यकता पर्दछ। सबैभन्दा पहिले, वायरलेस मोड्युल जाँच गर्नुहोस् (हेडसेटसँग जडान ब्लुटुथ मार्फत छ)। कहिलेकाहीँ यो च्यानल मात्र खोल्न बिर्सिएको छ, कहिलेकाहिँ समस्या पुरानो चालकमा छ।
सिग्नल परीक्षण गर्न, तपाइँ पीसी र इन्टरनेट स्रोतहरूको प्रणाली क्षमताहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो अवस्थामा, कार्य टास्कबारको दायाँ छेउमा स्थित स्पिकर प्रतिमामा राइट-क्लिक गर्न र "रेकर्डिङ उपकरण" वस्तु चयन गर्नुहोस्। एक माइक्रोफोन यन्त्रहरूको सूचीमा देखा पर्दछ।
स्पिकर सेटिङ्हरूमा जानुहोस्
माइक्रोफोनको नामको साथमा लाइनमा डबल-क्लिक गर्दा अतिरिक्त मेनु ल्याउनेछ, जसमा तपाइँ भागको संवेदनशीलता र माइक्रोफोन एम्पलीफायरको लाभ समायोजन गर्न सक्नुहुनेछ। अधिकतममा पहिलो स्विच सेट गर्नुहोस्, तर दोस्रो 50% माथि उठाइनु हुँदैन।
माइक्रोफोन सेटिंग्स समायोजन गर्नुहोस्
विशेष स्रोतहरूको मद्दतमा, तपाईं वास्तविक समयमा माइक्रोफोनको अपरेसन जाँच गर्न सक्नुहुनेछ। परीक्षणको बेला, ध्वनि आवृत्तिहरूको हिस्टोग्राम प्रदर्शन गरिनेछ। यसको अतिरिक्त, स्रोतले वेब क्यामेरा र यसको आधारभूत प्यारामिटरहरूको स्वास्थ्य निर्धारण गर्न मद्दत गर्नेछ। यी एक साइटहरू //webcammictest.com/check-microphone.html।
साइटमा जानुहोस् र हेडसेट परीक्षण गर्नुहोस्
यदि परीक्षणले सकारात्मक परिणाम दिए, चालक ठीक छ, भोल्युम सेट अप छ, तर माइक्रोफोन सिग्नल अझै पनि छैन, तपाईंको मेसेन्जर वा अन्य कार्यक्रमहरू प्रयोग गरी अपडेट गर्ने प्रयास गर्नुहोस् - सम्भवत यो यो हो।
आशा छ, हामीले तपाईलाई माइक्रोफोनको पत्ता लगाउने र समस्या निवारण गर्न मद्दत गरेका छौं। सावधान रहनुहोस् र कुनै पनि कार्य पूरा गर्दा सावधान रहनुहोस्। यदि तपाईं मरम्मतको सफलता भन्दा अघि निश्चित हुनुहुन्न भने, यो व्यवसायलाई पेशेवरहरूलाई सौंप गर्न राम्रो छ।
भिडियो हेर्नुहोस्: हडफन क लए सतलत ऑडय बहतर Is? (सेप्टेम्बर 2019).
https://termotools.com ne.termotools.com © ध्वनि 2019